Sawiro DepositPhotos: Sawirro Hantiyadeed oo Bilaash ah oo Boqortooyo leh oo Dib-u-eegis Sawir ah! | Martech Zone
Waxaan isticmaalnaa tan ah sawiro kayd ah oo aan boqortooyo lahayn. Laga soo bilaabo boggeena, qoraalada blog, joornaalada, iyo sidoo kale dhamaan waxyaabaha aan u soo saareyno macaamiisha, biilkeena sawirada sawirada wuxuu ahaa boqolaal doolar bishii. Waxay umuuqatay sida ugu dhakhsaha badan ee aan xisaabta u buuxiyo, way madhnaan doontaa toddobaad gudihiis ama wax la mid ah. Waxaan ku bixinay xoogaa qiimo culus goob caan ah oo sawir kayd ah.
Waa maxay Royalty-Free
Sawirro ka madax-bannaan, ama RF, ayaa oggolaanaya adeegsiga xaddidan ee sawirrada iyada oo aan loo baahnayn in la bixiyo adeegsi kasta. Tusaale ahaan, haddii aan u soo iibsanno sawir aan boqortooyo lahayn boqortooyadeenna, waxaan u adeegsan karnaa si ka badan boggayaga iyo dammaanaddayada (iyadoo ku xiran iibiyaha). Si kastaba ha noqotee, ma iibin karno ama uma isticmaali karno macmiilkeenna. Iyo haddii aan u adeegsanno macmiilkeenna, sidoo kale uma isticmaali karno dammaanad noo gaar ah. Aad uga taxaddar akhriska daabacaadda wanaagsan ee isticmaalka! Qaarkood waxay gaar u yihiin isticmaalka aan ganacsiga ahayn, kuwa kale waxaa laga yaabaa inay leeyihiin waqtiyo ama adeegsiyo xadidan.
Haddii aad ku xad gudubto shuruudaha adeegsiga ee ku saabsan sawirradaada bilaashka ah ee boqortooyada, waxaa lagugu xanaaqi karaa warqad ka timid milkiilaha xuquuqda. Caadi ahaan waxay rabaan boqolaal ama kumanaan doolar oo soocelin ah si qaldan use waxayna ugu hanjabaan talaabo sharci ah hadaadan u hogaansamin. Dadka badankood waxay bartaan casharkooda, way bixiyaan biilka, wayna sii socdaan.
Immisa ayey le'eg tahay Qiimaha Sawirada Hantidhawrka Bilaashka ah?
Waxaa jira kharashyo fara badan oo loogu talagalay sawirrada keydka ah iyo inta badan aaladaha ku shaqeeya nidaamka dhibcaha. Runtii waxaad ubaahantahay inaad u turjunto dhibcaha doolarka. Qaarkood waa xoogaa dinaar ah, waxay kuxirantahay cabirka sawirka… kuwa kale sawirkiiba dhowr doolar ayey noqon karaan. Oo weliba kuwa kale waa kharash halkii sawir halkii isticmaal!
Waxba kama qabno inaan bixinno intii aan bixin jirnay maxaa yeelay waan ogayn sida sawirrada muhiimka ahi ugu jiraan wax kasta oo aan qabanayno. Dadku waxay si weyn u dhayalsan yihiin saameynta sawirka quruxda badan uu ku leeyahay fariinta ay isku dayayaan inay la xiriiraan. Iyo dadka adeegsada Raadinta Sawirka Google oo ku tiirsan raadinta boqornimada-bilaashka ah waxay weydiisanayaan dhibaato! Marar badan ayaa sawirka si khaldan loo isticmaalay oo Raadinta Sawirka Google ayaa ka ogaanaya goobta si xun u isticmaalida, taas oo muujineysa inay ka madax bannaan tahay boqortooyo markay tahay.
Waa Run… Sawir Qiima Leh Kun Erey
Waxaan ku noolnahay adduun muuqaal ah. Markaa haddaad diyaar u tahay inaad ku bixiso boqolaal doolar waxyaabaha ku jira, inaad maal gashato sawir qurux badan waa wax aan caqli gal ahayn! Iyo DepositPhotos hadda waxay ku darsadeen qalab Sawir Dib u celin ah iskudhafkooda! Ka baxsan sawirada, waxay sidoo kale bixiyaan:
Sawirada Vector - Bilaw bilow bilowga nashqadeynta joornaalka ama sawir-gacmeedka qaab-dhismeedkooda qaabdhismeedka cajiibka ah iyo kuwa kale sawirada vector.
Jaantusyada - Uma baahnid dulinka? Kaliya soo degso sawirro aan boqortooyo lahayn waxaad u baahan tahay.
videos - Ma dooneysaa inaad ku darto xoogaa fiidiyow ah oo kayd ah oo loogu talagalay asalka bartaada ama fiidiyowga wax lagu kaydiyo ee fiidiyowgaaga xiga? Waxay heleen xul aad u fiican.
Sawirada Tifatiraha - Miyaad raadineysaa sawirro qaar si aan ganacsi loo adeegsan? Waxay heystaan ​​xulasho weyn oo sumcad iyo sawirro caan ah oo loo isticmaali karo nuxurka tifaftirka.
Music - Ma u baahan tahay xoogaa muusiko ah oo loogu talagalay fiidiyow ama fiidiyoow iyo dibedda? Iyagu waxay heleen xulasho weyn sidoo kale!
Ma ahayn ilaa ay kooxda ka gaartey Depositphotos igala soo xiriiray bartayada iyo isticmaalka sawirada saamiyada oo aan ogaaday inaan qarash gareyno lacag aad uga badan intii aan heli laheyn. Depositphotos hadda waa kafaala-qaadeena oo u siineynaa sawirada keydkeena Martech Zone iyo waliba shirkadaha kale. In kasta oo taasi ay tahay heshiis aan caadi ahayn annaga, qiimeynta adiga ayaa sidoo kale ah mid la yaab leh!
Wixii ugu hooseeya $ 29 bishiiba, waxaad isticmaali kartaa illaa 30 sawirada saamiyada ee aan lahayn boqortooyada bil kasta laga bilaabo Depositphotos! Taasi waa qiimo aan caadi ahayn oo u wanaagsan celceliska ganacsiga soo saara qoraallada baloogyada, waraaqaha cadcad, daraasadaha kiisaska, wicitaanada-ficillada, naqshadaha websaydhka, iyo bogagga degitaanka! Kudar sawir kayd ah oo boqortooyo-la'aan ah farriintaada waxaadna arki doontaa sida loo hagaajiyay natiijooyinkaaga!
Saxeex u Noqo Kaydka Sawirada
Bixinta: Waxaan isticmaaleynaa kuweena isku xirka xiriirka loogu talagalay DepositPhotos ee boostadan!
Tags: sawiroka hel sawirrada khadka tooska ahraadinta sawirka googlesawir muuqaal ahraadinta sawirka gadaalrflacag la'aan boqornimadasawiro kayd ah oo aan boqortooyo lahaynTaageerophotos stock